NRNA चुनाबी झटारो: एनआरएनमा सबैभन्दा धेरै चर्चाको बिषय र मेरो उट्पट्याङ्ग जवाफ
by Krishna KC | Updated: 23 Aug 2019
कृष्ण के सी/अमेरिका/८/२३/१९
होइन हो कृष्णजी यो चुनाबमा कुमारजी र कुलजी मध्ये कसले जित्छ ? भबनजीले कसलाई समर्थन गर्छन ? शेष घलेले कसलाई समर्थन गर्छन ? उपेन्द्र दाइ र जिबाको त कुरै गर्नु पर्दैन सबैलाई थाहा नै छ। होइन देबमानदाइ चाहिं किन हराएछन नि ? फलानो कतापटिको ? आदि इत्यादि ! !
म जस्तो सामान्य व्यक्तिले त यस्ता अनगिन्ति प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपरेको छ भने संघका अग्रज र वर्तमान नेताहरुको हालत त झन चौपट्टै भएको होला भन्ने मेरो अनुमान छ। नेपाली समाजमा काम भन्दा उपदेश धेरै, क्षमता नै नभएका नेता धेरै, आफ्नो काम नगर्ने अरुलाई उपदेश दिने व्यक्ति अत्यधिक रुपमा पाइन्छ। अनि म पनि त्यहि समाजको एउटा अर्को कुरुप पात्र नै परे।
धेरै दिक्क भए पछि मैले पनि हाँसी मजाकमा जवाफ दिन थाले। कहिले काहिँ म उट्पट्याङ्ग कुरा गर्न मन पराउंछु। यसपाली पनि त्यसै गरे।
पहिलो प्रश्नको जवाफ मैले यसरी दिए, भबन भट्टले जसलाई समर्थन गर्छन उसैले जित्छ अनि जसले जित्छ भबन भट्टले उसैलाई समर्थन गर्छन। अन्तिम पटक भबन भट्टसँग कुरा भएको नै महिनौं भैसक्यो अब म के जवाफ दिनु त?
दोश्रो प्रश्नमा मैले भने, शेष घलेको जवाफ मैले दिने होइन, उहाँलाई नै सोधौं। अर्को कुरा उहाँले बोल्नु हुन्न, मौन बसेको व्यक्तिलाई जसले पनि मतिर भने भैगयो। होइन भने भिजन २०२० जसले बोक्छ उसैलाई समर्थन छ भनौ।
तेश्रो पशनको जवाफ, शेष घले र जिबा लामीछाने दुबैको प्रबक्ता म होइन। उहाँहरु मिले या मिलेका छैनन् त्यसको ट्रयाक मैले किन राख्नु ? यसो गर्दा मैले पुरास्कार र दण्ड दुवै पाउँदिन।
अन्तिम प्रशनको जवाफ-चुनाब कुमार पन्त या कुल आचार्य कसले जित्छ भन्नुभन्दा पहिला, नोमिनेशन भएर मत दिनुपर्यो। त्यसका लागि अक्टुवर १७ सम्म कुर्नुपर्यो। अनि म ठ्याक्कै मिलाएर जवाफ दिन्छु।
त्यसपछि जवाफ दिन नै परेन। कसैले नेपालबाट फोन आयो भनेर राखे, कसैले कुनी ऐले पछि गर्छु भने, कसैले के भने। क्या सजिलो भयो !!!
तर जे सुकै भएता पनि आजकल सबै भन्दा धेरै चर्चा नै यिनै बिषयमा भएको छ। आफ्नो काम छाडेर पनि मान्छेहरु कसको समर्थन कसलाई जान्न लालायित भएका छन्। छुस्केका ठुस्के कुरा हुन या भुरेका लुरे कुरा हुन् पत्याइ हाल्छन, सजिलै।
नेपाल अमेरिका पत्रकार संघको सदस्य १४१ जना, अधिवेशन जुलाई २४-२५ मा
नेपाल अमेरिका पत्रकार संघ (नेजा) को कार्यसमिति बैठक जुन ९, २०२१ मा बसेर पारित गरेको सदस्यहरुको अन्तिम नामावलीमा १४१ जनाको नाम रहेको छ।
ओलीको अन्तिम अश्त्र नेपाल सहितको स्थायी समिती बैठक पनि नेपालपक्षबाट अस्विकार
पत्रकार महासंघ बेलायतको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै उजुरी:प्रेस युनियनद्वारा बहिस्कार
एनआरएनए एनसीसी स्पेनको उपाध्यक्षमा ललितपुरकी सुन्दरी लामा उम्मेदवार
रक्तदातालाई धन्यवाद दिई विश्व रक्तदाता दिवस मनाईँदै
कुवेतमा ज्यान गुमाएका ४ नेपालीको शब कतार हुँदै नेपाल पठाइदै
बेलायतबाट पाँच अग्रज मिडियाकर्मीलाई पत्रकार महासंघ बेलायतको सम्मान
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ सम्म हुने
एनआरएनए एनसीसी अमेरिकाको १० औं साधारणसभाको तयारी कमिटी र अन्य कमिटीहरु
राजाधनी काठमाण्डौमा नै निर्माण कार्यमा ठेकेदारको लापरबाही, स्थानिय सरकार मुकदर्शक
एफएनजे युरोप सहसचिव तथा संपादक लामीछाने एनअरएनए स्पेनको महासचिवका उम्मेदवार
गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीमा काँग्रेसको संसदीय दल नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नियुक्त
आगो उसै जन्मिँदैन
स्वास्नी त कमरेड ! अर्कैकी ठीक
कस्तो सपना देख्नु राम्रो, कस्तो नराम्रो, बिस्तारमा
जस्ले भन्छ आरामै छु, लुकाइ चोटहरु-पन्त
प्रदेश सांसद वैद्यलाइ शब्द फिर्ता लिएर आत्मालोचना गर्न नेकां प्रवक्ता शर्माको आग्रह
एनआरएनए यूकेको सदस्यता ९ हजार भन्दा धेरै आवेदन समय सकियो
१४ औं महाधिवेशनबारे छलफल गर्न सभापति देउबाले पदाधिकारी बैठक बोलाए
गण्डकीको मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र पोख्रेलले ३१ मत सहितको दावी गरे
सुबेच्छा भडेलसँग लेखनाथ गौतमले गरे फेशनका कुरा
हलिउडकी चर्चित नायीका, निर्देशक तथा प्रडुसर एन्जलीना जोलीबारे छोटो चर्चा
नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको एक महिने पत्रकारिता तालिम सम्पन्न
मेलानको १६ औ स्थापना दिवसको अवसरमा ७ वटै प्रदेशहरूमा शान्ति दीप प्रज्वलन
ओलीका विश्वासपात्र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले पाएनन् विश्वासको मत
भारतीयलाइ नागरिकता दिन ल्याइएको नागरिकता संसोधनको पहिलो अध्यादेश सोर्कियो
मिस नेपाल नर्थ अमेरिकाको लागि पूर्व मिस नेपालहरु शृंखला, सदीक्षा र मनिता अमेरिका आउने
बेलायतका लागि राजदूत रेग्मीले महारानी एलिजाबेथ समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरे
तिमी मेरो भन्न पाँउ-इशानी
नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भदौमा नै हुने, सभापतिद्वारा सबैलाई सक्रिय बन्न आग्रह
एनआरएनए एनसीसी साइप्रसको ९ औं महाधिवेशन जुलाई १८ मा निर्वाचन कार्य तालिका सहित
क्यालिफोर्नियाको अर्थतन्त्र जुन १५ देखि पूर्वरुपमा खुल्ने, ब्याक टु नर्मल
सान होजेकी एक आमाले आफ्नै सन्तान मारेको आरोपमा गिरफ्तार
नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद मिलाउन दोश्रो दर्जाका नेताहरुबीच बैठक
आचार्यद्वारा गोर्खाहरुको समस्या र गैरआवासीय नागरिकताबारे पहल गर्न उपप्रधानमन्त्री महासेठको ध्यानाकर्षण
ललितपुरको वाग्मतीमा वाग्मिता साहित्य प्रतिष्ठान स्थापना, अध्यक्षतामा नवराज सञ्जेल
डा हर्क गुरुङ स्मृति भलिबल कपको उपाधी सिन्धुलाई
गुल्मी समाज युके र एनआरएन युकेका उम्मेदवारहरूबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
एमाले अध्यक्षको फर्कने आब्हानको नेपाल समुहद्वारा अस्विकार
जनसम्पर्क अष्ट्रेलियाले गर्यो नेपाली समुदायसंग अन्तरक्रिया
अनेसास अस्टिन च्याप्टरको मासिक रचना वाचन कार्यक्रम सम्पन्न
एनआरएनएले यसै बर्ष देखि अरनिको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार दिन शुरु गर्ने